Golaha shacabka oo ansixiyay xeerarka Hanti-dhowrka iyo Bangiga Dhexe - Halbeeg News
Golaha shacabka oo ansixiyay xeerarka Hanti-dhowrka iyo Bangiga Dhexe
Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
MUQDISHO (HALBEEG)- Xildhibaannada golaha shacabka baarlamaanka Federaalka ah ayaa maanta ansixiyay wax ka beddal lagu sameeyay hindise sharciyeedka Hanti-dhowrka guud ee Qaranka.
Xildhibaannada golaha xaadirka ku ahaa oo ay tiradoodu ahayd 170 mudane ayaa 163 mudane oo ka mid ah ay u codeeyeen wax ka badalka Hindise Sharciyeedka Hanti dhowrka guud halka 13 xildhibaan ay kasoo horjeesteen.
Guddoomiyaha golaha shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka shir guddoominayay ayaana ku dhawaaqay natiijada codeynta isaga oo sheegay in wax ka beddelka xeerka Hant-dhowrku uu sidaa ansax ku yahay.
Qodobbadii ugu muhimsanaa ee ay xildhibaannadu wax ka beddelka ku sameeyeen ayaa waxaa ka mid ahaa ilaa iyo 15 qodob kuwaasoo ay ugu muhimsanaayeen qodobka kowaad oo wax ka badal lagu sameeyay magaca sharciga oo markii hore ahaa sharciga guud ee hanti dhowrka federaalka waxaana lagu badalay sharciga xafiiska Hanti-dhowrka guud ee qaranka kaasoo ay ku macneeyeen in uu yahay magac halbeeg u ah inta badan dowladaha ku dhaqma nidaamka federaalka.
Sidoo kale xildhibaannada ayaa wax ka beladdalel ku sameeyay qodobka afaraad faqradiisa labaad oo ka hadleysay dib u habeynta xafiiska Hanti-dhowrka guud oo u qoran sidan
“Xafiiska Hanti-dhowrku waa hay’ad madax bannaan waana hay’adda ugu sarreysa ee hanti dhowrka Soomaaliya wuxuuna u warbixiyaa golaha shacabka ee baarlamaanka haddii loo baahdana warbixin siinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra’isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya,” waxaana loo badalay
“Xafiiska Hanti-dhowrka guud waa hay’ad madax bannaan waana hay’adda ugu sarreysa ee baarista hantida qaranka wuxuuna warbixintiisa u gudbinayaa labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ra’isul wasaaraha xukuumadda federaalka si siman”.
Hanti dhowraha guud ee qaran ayaa u mahaceliyay xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka ee maanta ansixiyay hidise sharciyeedka xafiiska hanti dhowrka federaalka Soomaaliya isaga oo tilmaamay in dalka uu meel fog ka yimid hiigsi wanaagsanna leeyahay.
Dhanka kale isla maanta ayay golaha waxay dood kulul ka yeesheen xeerka maamul xulidda guddoonka bangiga dhexe ee dalka.
Xildhibaannada ayaa cod aqlabiyad ku anisixiyay maamulka Bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Fadhiga baarlamaanka oo ay soo xaadireen 175 xildhibaan ayaa waxaa wax ka bedelka sharciga u codeeyay 158 xildhibaan meel marinta sharciga halka 17 xildhibaanna ay diideen wax ka badalka sharciga, isagoo sidaa ku ansaxay.
Al-Shabaab oo burburisay xarun Safaricom ay ku lahayd duleedaka Gaarisa
Madaxweynaha Puntland oo joojiyay dhismayaal ka socda dhulka dowladda